/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Fosaprepitant dimeglumine (EMEND) ntụ ntụ
SKU: 265121-04-8. Category: R & D mmeghachi omume
Molekụla Formula: C23H22F7N4O6P.2C7H17NO5
Ọbara arọ: 1004.83
A na-egosiputa ntụpọ nke dimeglumine na-egbuke egbuke 150 mg na ndị toro eto na ndị ọzọ na-agwọ ọrịa antiemetic maka mgbochi nke ọgbụgbọ na vomiting metụtara mbụ na mmegharị ọmụmụ nke MEC. Ngwá ọgwụ a kwadoro na ndị okenye bụ otu 150-mg nke na-ejupụta na 20 ka ọ bụrụ 30 nkeji dịka 30 nkeji tupu chemotherapy na Day 1. Nkwado FDA nke ihe ọhụrụ a na-adabere na akụkụ nke nchoputa site na nchịkọta, nke yiri, doubleblind, nchịkwa nke na-arụ ọrụ nke na-atụle onye na-achọpụta ọgwụ maka ịṅụ ọgwụ dịka ọnụọgụ na-emetụta ya na ondansetron na dexamethasone (nke a na-akpọ EMEND ntụ ntụ ) (N = 502) ma e jiri ya tụnyere ondansetron na dexamethasone naanị (njikwa akara) (N = 498) na ndị ọrịa na-anata MEC. Ihe kachasị mma bụ nzaghachi zuru ezu (akọwapụtara dịka enweghị mmụba na ọ dịghị iji ọgwụgwọ agwọ ọrịa) na oge na-egbu oge (25 ruo 120 awa ndị na-esote mmalite nke chemotherapy) nke chemotherapy-induced nausea na vomiting. A chọpụtara 78.9% ọnụego zuru ezu na usoro Fimapant dimeglumine ntụ ntụ ma e jiri ya tụnyere 68.5% na usoro njikwa (P <0.001). Mmeghachi omume na-emekarị nke ọma na-egosi na EMEND ntụ ntụ na-achịkwa usoro nchịkwa bụ ike ọgwụgwụ (15% vs 13%), afọ ọsịsa (13% vs 11%), neutropenia (8% vs 7%), asthenia (4% vs 3%) , anaemia (3% vs 2%), neuropathy gburugburu (3% vs 2%), leukopenia (2% vs 1%), dyspepsia (2% vs 1%), urinary tract infection (2% vs 1%), na ihe mgbu na njedebe (2% vs 1%).
Fosaprepitant dimeglumine Nri ntụ ntụ Ntụziaka:
Onye na-ahụ maka ọgwụ ọjọọ na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe